बुटवलमा मलामी गएकाहरुमा धमाधम देखिन थाल्यो कोरोना, – Khabar PatrikaNp
बुटवलमा मलामी गएकाहरुमा धमाधम देखिन थाल्यो कोरोना,
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–११ स्थित कालिकानगरकी एक महिलाको मृत्यु भएपछि उनको मलामी गएका तथा मलामीको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । कन्ट्याक्टको ट्रेसिडको आधारमा हालसम्म १८ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप ७ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ ।
Prevप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नेगरी तयारी
Nextदुखद खबर ! विवाह गर्न नमान्दा डाक्टरले गरे आफ्नै प्रेमिकाको ह’त्या !
काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका९३, बतासे डाँडामा बाटो निर्माण गर्दा फेला पर्‍यो यस्तो ऐतिहासिक मूर्ति
काठमाडौंको टिचिङ अस्पतालमा उपचाररत चार जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु